Waita hako! Ini Ndakamedura 700 Feed Readers uye Technorati's 2,000 Maka! | Martech Zone
Waita hako! Ini Ndakamedura 700 Feed Readers uye Technorati's 2,000 Maka!
Chitatu, July 11, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakanga ndaguta. Ini ndinoda kushandisa yangu Technorati Chinzvimbo segwara rekuti rakabudirira sei blog rangu rave uye uye kana kuti kana zvichiri kuramba zviri. Kwemavhiki akati wandei ndakabvarura zvisingaite padyo neiyo 2,000 chinzvimbo. Pane imwe nguva ndakatombonyura pasi kusvika kungodarika zviuru zviviri… uye ndikazodzokera kumashure kusvika ku2,000. Ugh. Yakanga yatanga kundityaira nzungu. Ini ndanga ndichiona iyo zviuru zviviri kwese kwese.
2007 rakakurumbira mazuva ano.
Pakati pazvo zvese, blog yangu yakatoita peji rekumba reSlashdot (mune yepamusoro zana paTechnorati). Ndakaora mwoyo… kana Slashdot akataura nezvangu neni vachiri haikwanise kutyora zviuru zviviri panofanira kunge paine chinhu Ndinogona. Uye paiva!
Zano rangu rekupaza kuburikidza neTechnorati 2,000 Maka:
Zvakadii kutora ruzivo rwandakadzidza pakubata bhurogu yangu nekubatsira vamwe kurishandisa kublog ravo? Dzimwe nguva zviri nyore kuverenga kuraira, asi kuishandisa kunogona kuomarara! Saka, ndakafunga kuenda Blog-Kubvarura. Ini ndaifunga kuti yaive yakanaka mutambo pamashoko - asi painomuka, izwi iri rakamboshandiswa zvishoma. Ndinovimba ndakaisa spin pairi hazvo. Ini ndakangopa vanhu rubatsiro nerokupa matipi ekuvandudza yavo blog kana vakataura zvangu.
Hapana mari, hapana kupihwa, hapana makwikwi… ingori rubatsiro rwemahara. Mukomana, zvakashanda here! Ndinokutendai imi vanhu, ini ndakapunzika nepakati pezviuru zviviri uye ndine simba rekuitora zvakanyanya. Iri zano rakaomarara… Ini ndoda kuverenga, kuongorora uye kutsvagisa yega yega blog uye ndiwane matipi akanaka Ini ndinoedza kusadzokorora matipi - ini ndinonyatsoedza kutsvaga akasiyana masosi neblog yega yega yandakaburitsa.
Icho chinetso! Ndiri kudzidza zvakawanda panguva ino, zvakadaro. Imwe isingazive kubatsirwa: Vaverengi vari kureva yangu posvo kuti vatore iwo blog matipi, uyezve ivo vari kureva bhuku rangu mushure mekuita shanduko! Icho chaive chinhu chandisina kana kutarisira asi chakanyatso kuve nesimba rakakura.
Zvichida dambudziko guru randaifanira kufambidzana naro nderekuti muromo Lendo.org, blog isiri kunyange muChirungu! Kunyangwe ini ndaishandisa vashanduri kuona zvimwe zvezvirimo - zvaingova kugaya izvo izvo misoro yaive pablog (kuverenga). Pandakangopedza posvo André nemunyori wake Daisy, nekukurumidza yakagadzirisa zvimwe zvinoshamisa - kusanganisira yakanaka yemusoro graphic iyo inoita kuti unzwe uri pamba uye wakagadzirira kuverenga! Ini handigoni kumirira kuti ndinzwe kubva kuna André naDaisy kuti blog iri kuita sei mavhiki mashoma kubva zvino.
Nhasi ndarova zvibodzwa zviviri - 700 vaverengi pa FeedBurner uye zviuru zviviri pa Technorati. Kutenda zvakanyanya kuvaverengi vangu, vatsva nevakuru, nekubatsira kundiendesa kumaki aya!
Zvinangwa zvangu zvitsva:
Pakupera kwegore, ndinoda kuputsa chiverengero chevaverengi chiuru pane chikafu changu uye ndinoda chaizvo kutyaira kuenda ku1,000 Technorati Rank. Ndizivise kana iwe uri kufunga kuenda. Ndinoda kuti urambe uripo!
Ndakatanga Kunyora Chinyorwa…
Jul 11, 2007 na11: 35 PM
Makuru pakubudirira kwako, Doug!
Jul 12, 2007 pa 7: 15 AM
Haizove blog pasina hurukuro, Slaptijack! Ini ndinotenda chaizvo neboka rinoshamisa rezvakanaka zvakapa zvakanyanya kublog iri. Ini ndinofunga makomendi ndiwo ekutanga chigadziriso chebudiriro yeblog. Ose mazwi angu kune mamwe mablog - uye ako pane angu.
Ndiri kunyatsotenda kwamuri mose vanhu. Ndingadai ndisina kuzviita pasina ivo vako vane hanya zvakakwana kuti vawedzere pakukurukurirana!
Jul 12, 2007 pa 12: 07 AM
Makorokoto nekuzadzisa zvinangwa zvako ... vanogona kukupa kukurumidza kukuru kana zvikaitika uye ini kune imwe ndichave ndichiripo paunoita yako inotevera seti yezvinangwa.
Jul 12, 2007 pa 7: 17 AM
Ndatenda Steven! Verenga yangu yekutanga kutaura - zvinoshanda kune mese vanhu imi. Iwe unonyatso ita izvi zvive nyore!
Jul 12, 2007 pa 12: 47 AM
Ini ndinoda dhizaini nyowani!
Ndiri kugara ndichibata!
Jul 12, 2007 pa 1: 26 AM
Ida chako chinangwa chako. Ramba wakadaro unosvika ikoko.
Jul 12, 2007 pa 7: 16 AM
Jul 12, 2007 pa 6: 53 AM
Wow! Uyu ndiwo mubairo wako mukuru wekubatsira mabloggi kubva pasirese, seni!
Mushure meizvi, mune vaverengi vaviri vatsva, ini naDaisy, asi isu tinokukurudzirai kune vakawanda vakomana! Uye ava 'vakomana vazhinji' vachakurudzira kune vamwe 'vakomana vazhinji'.
Makorokoto makuru! Ndihwo hunhu hwako! 🙂
Jul 12, 2007 pa 7: 18 AM
Ndatenda zvikuru nemukana wawakandipa, André! Ndokumbira utizivise mafambiro anoita zvinhu.
Jul 12, 2007 pa 7: 21 AM
Eheka! Ndicharamba ndichibata 😉
Jul 12, 2007 pa 8: 31 AM
Jul 12, 2007 pa 9: 26 AM
Ndatenda Tony !!!
Jul 12, 2007 pa 11: 29 AM
Makorokoto. Haisi nguva refu yapfuura zvekuti wakarova mazana mashanu evanyoreri uye iwe wato wedzera mamwe mazana kune izvo. Uri kuenda mukuru ikozvino. Ingori nyaya yenguva usati warova vaverengi 500.
Jul 15, 2007 na9: 41 PM
Zvinotaridza kunge ndezve nezve kukurumidza, handizvo here? Ndanga ndichiparidza izvo kwenguva yakati rebei ikozvino - uye zvinonakidza kuti zvinoramba zvichikura sei.
Ndinoshuva dai ndakanga ndichiteedzera kukura kubva pakutanga kuona - asi ndinofunga zvakafanana neFibonacci… 1,2,3,5,8,13,21…
Jul 15, 2007 na6: 43 PM
Makorokoto. Ndine chokwadi chekuti hapana kwandinoenda. Kana ndakadaro iwe waigona kugara uchindibata kumashure panguva yekukurumidza scan ine zita hombe.
Jul 15, 2007 na9: 42 PM
Ndatenda, Tinu! Ini ndinotenda chaizvo rutsigiro rwese. 🙂
Jan 9, 2009 pa 10: 20 AM
Ndine blogging kwemamwe mwedzi uye ini ndichiri munzira dzakaipa uyezve ndichiri kusakwanisa kutyora senge zvawakaita. Ndiri kunyatsovimba kuti zano iri richashanda zvakazara kune yangu technorati. Ndatenda zvikuru 🙂